နောက်ဆုံးရသတင်းများ - ၃၃၆၂၅ ခု
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ PDF အမည်ခံအကြမ်းဖက်သမားများက ပညာသင်ကြားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ပြားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာရေးကဏ္ဍမြင့်မားရေးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 04, 2022
NUG အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံ PDF အမည်ခံ အကြမ်းဖက်သမားများသည် အနာဂတ်ရင်သွေးငယ်များ၏ ပညာသင်ကြားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများပျက်ပြား၍ ..................
အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြေညာထားသော CRPH၊ NUG နှင့် ယင်းတို့၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ....................
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 04, 2022
Cambodian Deputy Prime Minister visits Shwedagon Pagoda
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 04, 2022
A delegation led by Mr Prak Sokhonn, Special Envoy of the Alternate Chair of ASEAN on Myanmar Deputy Prime Minister Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia visited Shwedagon Pagoda in Yangon yesterday morning.
Deputy Information Minister inspects information services in Southern Shan State
DEPUTY Minister for Information U Ye Tint inspected the Department of Information and Public Relations and Public Library in Kalaw Township of southern Shan State on2July.
KACHIN State Chief Minister U Khat Htein Nan, Deputy Minister for Agriculture, Livestock and Irrigation Dr Aung Gyi and State Cabinet Ministers attendedaceremony to supply Macadamia seedlings and equipment to farmers at Nawngnan Rubber Farm in Myitkyina, through the Mekong-Lancang Fund on 1 June.
THE information was released on2July that the KNLA and the so-called PDF terrorist group repeatedly attacked the Ukarithta camp withalarger strength. Tatmadaw members from the camp relentlessly fought the terrorists by taking ground and air supporting fire with all their might, and reinforcements worked together with those from the camp amid the geographical barriers and climatic conditions, and they performed local security measures at the camp and environs.
DRUGS were seized in Myeik and Muse townships as reported by the Myanmar Police Force.
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဇူလိုင် ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့် မေးမြန်းမှုများကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
မေ ၂၀ ရက်မှ စတင်၍ ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာများကို e-Visa စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း ၁၁ လိုင်းဖြင့် ခရီးစဉ်ပေါင်း ၁၅ ခုမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ တိုးတက် ဝင်ရောက်လျက်ရှိ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 04, 2022
သတင်းစာများ - ၁၃၂၈ ခု
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ July 04, 2022
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ July 03, 2022
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ July 02, 2022
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ July 01, 2022
ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အလင်း/ June 30, 2022